‘ए’ डिभिजन लिगः आज दुई खेल
काठमाडौँ । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगअन्तर्गत आज दुई खेल हुँदैछन् ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा हुने छैटौँ चरणको अन्तिम दिनको खेलमा आज फ्रेण्ड्स क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । दोस्रो खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लबले मछिन्द्र क्लबसँग खेल्नेछ । लिगको उपाधि दाबेदार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई फ्रेण्ड्सविरुद्व जीत निकाल्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिने मौका छ । पहिलो खेलमा न्यूरोड टिम ९एनआरटी० सँग २–२ को बराबरीमा रोकिएपछि आर्मीले लगातार चार खेलमा जीत हात पारेको छ ।
आर्मी पाँच खेलबाट १३ अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ । फ्रेण्ड्स चार अङ्कसहित तालिकाको १०आँै स्थानमा छ । ब्रिगेड पाँच खेलबाट तीन अङ्क जोडेर १२औँ स्थानमा रहँदा मछिन्द्र दुई अङ्कका साथ तालिकाको १३औँ स्थानमा छ ।
काठमाडौका दुई स्थानमा बिस्फोट, तीनजनाको मृत्यु
काठमाडौँ । काठमाडौंको दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको विस्फोटमा परी तीन जनाको ज्यान गएको छ । सुकेधारामा आज दिउँसो ४ः३० बजेतिर भएको विस्फोटमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
सुकेधारामा सिलिन्डर विस्फोट
काठमाडौँ । काठमाडौंको सुकेधारामा आज दिउँसो ४ः३० बजेतिर भएको विस्फोटमा परी एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
यी तीन खेलाडी जसले वेष्ट इन्डिजलाई विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिताउन सक्छ
एजेन्सी । विश्वकप क्रिकेट सुरु हुन केही दिनमात्रै बाँकी छ । यसको तयारीस्वरुप सहभागी हरेक राष्ट्रले अभ्यास खेल पनि खेलिरहेका छन् । दुई पटककको विश्वकप विजेता वेष्टलाई यस संस्करणको उपाधि विजेताको रुपमा प
भिटामिन ‘डी’ को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?
भिटामिन डीको कमीले बच्चाहरूको हात–खुट्टा बांगा, लुलो हुने, हाड सानो हुने गर्छ । भिटामिन डीको कमीले शरीर नै कमजोर भएर जान्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएमा शरीरमा हाड मजबुत बनाउने तत्वको निर्माण हुँदैन । जसको कारण हाड कमजोर हुँदै जान्छ ।
यसकारण ‘रेड मिट’ नखानुहोस्
यस्तो रहेको छ आइतबारको तपाईको भाग्य !
यी हुन् विश्वकै खतरनाक फाइटर विमान चलाने युवतीहरु
यी हुन् विश्वकै चतुर महिला, बाल्यकालदेखि नै यस्ता थिए गुण
अनावश्यक गर्भबाट बच्न अजबगजबको उपाय !